15 UNINZI LWEEBRAS EZIKHULULEKILEYO 2021-EYONA BHRASHI ILUNGILEYO YOKUXHASA KUNYE NOKUPHAKAMISA - UBUHLE
15 Uninzi lweeBras eziThuthuzelayo ezibonelela ngenkxaso kunye nokuphakamisa, ngokutsho kwabavavanyi
Eyona / Ubuhle
Isitudiyo sekhonkrithiImifanekiso kaGetty
Ukufumana ibra ekhululekile kulucelomngeni, kodwa ukubambezela okucocekileyo kwaye unika abafazi bakho inkxaso yokuxhasa? Ewe, oko kunokuziva kungenakwenzeka. Iindaba ezimnandi zezi iimveliso ezininzi kunye nezitayile ezikhoyo, wena unako fumana ibra ekhululekile eyenza ukuba amabele akho akhangeleke, nawo.
Kodwa kuqala, yintoni ebangela ukuba amabele akho adumbe?
Unokubeka ityala ekulahlekeni kolusu luthambe kunye nomtsalane womxhuzulane, kodwa kukwakho nezinye izinto ezidlalayo-kubandakanya imfuza yakho.
Amandla kunye nokuthembeka kwethishu yakho yamabele ikakhulu kubhalwe kwi-DNA yakho, evela kubazali bakho, utsho URyan Neinstein , MD, ugqirha weplastiki kwiSixeko saseNew York. Ukujonga kumama wakho kunokukunika ulwazi malunga noko ukulindeleyo.
Ezinye izinto ezinokuchaphazela yakho Ubuhle bebele kubandakanya utshintsho olukhulu kubunzima, ukuncancisa, ukutshaya, kunye neminye imikhwa ekhokelela ekuphulukaneni nolusu luthambe, njengokulimala kwelanga.
Nokuba siyintoni na isizathu, ukuba amantombazana akho ajonge ezantsi, mhlawumbi ufuna ilifti. Ngelixa kungekho ndlela yexesha elide yokubaphakamisa ngaphandle kotyando, ibra yakho inokukunceda ukuba ukonyuse okwethutyana oko kukhululekile. Isitshixo kukwazi ukufumana indlela efanelekileyo.
Ungayikhetha njani ibra ekhululekile kwaye ixhasayo
✔️ Fumana izixhobo ezifanelekileyo: Kubalulekile ukuba ulungiswe ngokufanelekileyo yingcali yebra eqhelene nazo zonke iintlobo zeebra kunye nokuba nganye ingena njani, utshilo uLisa Curbello, umnini IBra Chick eBoerne, TX. Usebenze ukufakwa kwe-bra ngaphezulu kweminyaka engama-23 kwaye uthi malunga ne-85% yabasetyhini abangenayo banxibe ubungakanani obungebubo! Ukuba uthenga ibra kwi-intanethi kwaye awukwazi ukwenza ulungiso lomntu, jonga izikhokelo zokulinganisa olo hlobo lwentengiso ukuze uncede ufumane ukulunga.
Cinga ngaphandle kwebhokisi (ubungakanani): Musa ukuhlala ubambelele kubungakanani obunye. Zonke izitayile kunye neempawu zineemigangatho efanelekileyo eyahlukeneyo, kungoko unokunxiba iisayizi ezimbini okanye ezintathu, kuxhomekeke kwimveliso nakwizinto zokusebenza, utshilo uElisabeth Dale, umseki Ubomi besifuba kunye nombhali we Indawo yeBra: Ungawufumana njani uMgangatho wakho oGqibeleleyo, isitayile kunye neNkxaso . Ke zama ubungakanani obahlukeneyo kunye nezitayile de ufumane okulungeleyo.
Zama ubungakanani bosisi: Ukuba ufumana ibra echanekileyo kwindawo enye (ibhendi, umzekelo) kodwa incinci kakhulu okanye inkulu kakhulu kwenye (ubungakanani bekomityi), zama udade wakho wobukhulu bakho uzame. Ubungakanani boodade ubukhulu becala buphezulu okanye busezantsi kubungakanani bakho. Ukuba uyehla ngobukhulu bebhendi, kuya kufuneka uyenyuse ikomityi ukuze ulingane, utshilo uDale. Kwaye ukuba unyuka ubungakanani bebhendi, kuyakufuneka ususe ubungakanani bekomityi enye, uyongeza. Ke, umzekelo, ukuba uhlala unxiba i-34C, i-32D kunye ne-36B iya kuba bubungakanani boodade bo-bra bakho.
✔️ Splurge encinci: Kukho iitoni zebras ezikhoyo ukulingana naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali, kodwa zama ukungagqithisi ibra kwangoko ngokusekwe kwithegi yexabiso layo. Kufanelekile ukuchitha imali encinci kwi-bra efanelekileyo, ekumgangatho ophezulu eya kukunika into oyifunayo kunye nentuthuzelo oyifunayo, utshilo uCurbello.
Ukulungele ukuthenga? Jonga ukukhetha kwethu ukukhululeka kunye nenkxaso yeebras kuyo yonke imilo kunye nobukhulu bekomityi engezantsi.
Eyona Bhayibhile iKhontrakthi ngokugqibeleleyo
Intuition yatyhala iBraWacoal amazon.com THENGA NGOKU
Ubungakanani: 32A ukuya ku-38D
Ewe, isikipa se-T-shirt sinokwenza ukuba amantombazana akho abukeke enesithukuthezi! Siyazithanda iikomityi zegwebu ezigudileyo nezingenamthungo eziwanika amabele akho ukongeza ubuchule, ukumila, kunye nefuthe elichuliweyo lokutyhala. Ngcono nangakumbi: Inezibambo ezinokuhlengahlengiswa Unokuyinxiba uyilo lomnqamlezo ngenkxaso eyongezelelweyo yabasetyhini abaneebhasi ezinkulu.
Le bra iyamangalisa! Ukucoceka okukhulu, kwaye umbala ulungile kulusu lwam njengowasetyhini wase-Afrika waseMelika. Ukuphakanyiswa kwanele, utsho omnye umhlaziyi waseAmazon onwabileyo. Omnye umthengi waseAmazon wongeza, Le bra idlulile kulindelo lwam ngandlela zonke! Isakhelo esakhelwe-ngaphakathi sihamba kancinci ukusuka emacaleni nasezantsi ngaphandle kokucaca ukuba sineephedi.
Elona xabiso liBra
Ukuthuthuzeleka kokuzinikela kuBraUhlobo lobuntu amazon.com $ 44.00$ 22.99 (48% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ubungakanani: 32C ukuya ku-42D
Ngokungafaniyo nezinye iibras ezinendawo ephantsi ecaphukisa ulusu kwaye ibangele ukungonwabi, le bhraji ijongeke kamnandi ine-foam yelifu ethambileyo evakala ilungile. Iindebe zayo ezingenamthungo bonelela ngogqibo olongezelelekileyo ngelixa usakunika imilo enesini . Ngapha koko, umva wayo kunye necala eligudileyo lakha ukubukeka okuthe tye phantsi kwempahla yokujonga ukubengezela. Enye into elungileyo kukuba imitya emincinci ehlengahlengisiweyo ihlale kamnandi emagxeni akho ngaphandle kokumba kulusu lwakho.
Ndinobunzima bokwenene ekufumaneni iibras ezikulungeleyo kuba amabele am agcwele ezantsi kwaye aqelelene kancinci. Ndinesixa esifanelekileyo 'se-under boob boob,' okanye nantoni na ofuna ukuyibiza, utsho omnye umhloli weAmazon. Akuzange kubekho ubra olingana nam njengalo. Ixhasa yonke into kunye neetuck kumanqatha am angaphantsi kwekhwapha ngaphandle kokukhululeka kakhulu kwiincopho zamabele am. Ithambe kakhulu kwaye intofontofo kwaye inika isilhouette enkulu, nayo.
Eyona Brey engenazingcingo
I-18-Hour Ultimate Lift kunye neNkxaso yeBra-yasimahla kwiBraDlala amazon.com$ 16.99 THENGA NGOKU
Ubungakanani: 32C ukuya kuma-48DDD
Musa ukucinga ukuba kufuneka ulahle amaphupha akho e-boob yokunyusa i-boob efanelekileyo kuba i-underwires ayisiyonto yakho. Itekhnoloji yeebras ivela kude, utshilo uCurbello. Izitayile ezininzi ezintsha ziyakwazi ukwahlulahlula, ukumisa kunye nokuphakamisa ngaphandle kwe-underwire. Le ibonelela ngenkxaso ukusuka ezantsi phezulu , Ukunika ukuphakama kwendalo. Kwaye imitya yayo ibanzi, iyahlengahlengiswa, kwaye itywinelwe ukuthintela ukutyibilika kunye nokumba.
Ndinxiba ubungakanani obungama-38DDD kwaye bendidinga ibrafi enexabiso eliphantsi endinokuyinxiba apha endlwini okanye phantsi kwezinye iileya. Khange ndibekho kwintengiso yento ene-ultra-sexy okanye eza kundinika i-epic cleavage. Oku kuhle kakhulu kuyilingana nelo hlobo lwebra, ubhala umthengi omnye waseAmazon ngokugcwala okugcweleyo. Konwabele kwaye kugcina amantombazana exhaswe kakuhle, kwaye bekungabizi mali ininzi kangangokuba ndiza kuthenga ngaphezulu. Ilaphu lihle kwaye ngokwenene livakalelwa kukuba liza kuhlala lixesha elifanelekileyo.
I-Bra eNgcono engenazingcingo kunye noBukhulu
Ubungakanani bobukhulu beMagicLift yoQeqesho lwenkxaso yeFowuni yeBraUkuqaqamba amazon.com $ 48.00$ 35.76 (25% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ubungakanani: 36B ukuya ku-56J
Enye ibra efanelekileyo kubasetyhini abanamabele amakhulu, inkxaso, amagwebu aqatywe amagwebu kule bra yokuwela ngaphaya nangaphantsi kwendebe ukuya phakamisa, uzahlule, kwaye uxhase amabele . Ebanzi, edityanisiweyo, imitya yamagxa ehlengahlengayo ayizukumba emagxeni akho okanye ityibilikise iingalo zakho nokuba. Ngapha koko, ibhendi ebanzi esezantsi iyayithintela ukuba ingakhweli phezulu.
Ndinxiba i-42H. Le bhuyisi ilingana kakuhle kwaye iyandixhasa kunye nebra yam yakudala kwaye imalunga nokukhululeka njengokuba ibragi inokuba njalo, utshilo umntu owonwabileyo kumthengi waseAmazon. Imitya ibanzi kakhulu kunale yam yokugqibela, ke ndiyabaqhela, kodwa ayibuhlungu. Ndimangalisiwe kwaye ndayalela ezinye ezimbini kwangoko!
Eyona Bra ine-Underwire
Enye ye-Smooth U ye-Ultra Light Illusion Neckline Underwire BraBali amazon.com $ 44.00$ 23.33 (47% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ubungakanani: 34B ukuya ku-42DD
Le bhreyiti yokugubungela ngokupheleleyo iphakamisa kwaye yahlule njengephupha. It iilifti ezivela ngaphantsi kweekomityi kunye namacala . Ke ayisiyiyo kuphela amabele akho aya phezulu, kodwa ahamba phambili. Ngapha koko, inombala we-sexy illusion neckline owongeza into encinci kwisitayile.
Le yeyona bra yam ndiyithandayo! Eli lixesha lam lesithathu ukuyithenga kwaye ndigqibe kwelokuba ndibhale uphononongo. Ndinayo emnyama namhlophe kwaye ndiyayithanda indlela andinika ngayo. Ndinxiba i-38C, ndingu-5'7 kunye nobukhulu be-18, ke le bra iyanceda kakhulu ukuba indenze ndizive ndikhululekile kwaye ndimhle. Ndiza kuqhubeka ndiyithenga le nto ukuba nje bayayithengisa!
Eyona Balconette Bra
I-Balconette Bra engacwangciswangaSoma soma.com$ 24.98 THENGA NGOKU
Ubungakanani: 34B ukuya ku-36D
Ukuba amabele akho aqinile, zama i-demi-cup okanye i-balconette-style bra ukukunika oko kujikelezayo, 'ukujonga okuphezulu', utshilo uDale. (Ungakhathazeki, umphezulu we-muffin kule ndawo yinto elungileyo!) Le bhutsi intofontofo iilifti ezinjenge-push-up, kodwa ayinayo i-underwire okanye nayiphi na padding. Oko kuthetha ukuba ufumana ukukhuthazwa kwe-mega ngaphandle kokuphazamiseka. Imitya inokunxitywa ngendlela yesiko okanye kwisitayile somnqamlezo. Elona candelo lilungileyo ibra iza ngemibala eyahlukeneyo ye-11 eyahlukeneyo kunye nezitayile zeleyisi, ke iya kuyigcina ikumnandi ikhabethe lakho.
Umthengi weSoma ubhala athi, Intombi yam inxiba i-36DDD, ke ukufumana inkxaso enkulu kwibra kubaluleke kakhulu. Uzamile iindlela ezininzi kunye neebrendi, kodwa le bra ibe yeyona nto ayithandayo. Uyakuthanda ukufaneleka kunye nenkxaso!
IBra yeBrey engenazingci
Ubuhle buBuya buGudise iBrainto evanithi ngokuthambile kohls.com$ 34.99 THENGA NGOKU
Ubungakanani: 34D ukuya ku-44DD
Nokuba unxibe isinxibo esisemthethweni esingenamtya emtshatweni okanye itanki eliqhelekileyo elunxwemeni lolwandle, le bra yokuxhasa iya kugcina amantombazana akho ephakanyisiwe kwaye endaweni. Yenziwe ngelaphu ephothiweyo leyo iimilo kunye nezinto ezigudileyo zivela kuzo zonke ii-engile , kwaye inezivalo ezintathu zokutsalwa kukhuseleko nokongezwa. I-bra nganye iza neebhanti ezimbini ezinokuhlengahlengiswa onokuthi unxibe isitayile somnqamlezo.
Umthengi waseAmazon obekhangela ibra emnyama engenamtya ukuba ayinxibe phantsi kwelokhwe emnandi yelace uthi le bra ibifanelekile: Ndayalela i-40DD kwaye ilunge ngokugqibeleleyo. Ngokunikwa ubungakanani bamantombazana am, bendingaqinisekanga ukuba le bra ingawenza umsebenzi, kodwa yenze kakuhle. Ayibopheli yonke into ngokuqinileyo njengebhanti eboshiweyo, kodwa inike inkxaso ebalaseleyo.
Eyona ndawo uwela kuyo iBra
I-24/7 yeLace Contour yehla iBraUthando lwesithathu lwesithathu.com$ 70.00 THENGA NGOKU
Ubungakanani: 32AA ukuya ku-42H
Uthando lwesithathu lwenze amaza kwishishini langaphantsi okoko baqala ukukhuthaza ii-bras zabo zekomityi. Injongo yayikukubonelela nge-bra eyayikhona zombini ziyaxhasa kwaye zilungile ngokuchanekileyo , ngaphandle kokulalanisa. Le breyji yokuntywila ikunika ukuphakamisa kunye nokuncoma ukubulela kufakelo olususekayo. Uyilo lwayo oluhle lacy luyinika into entle, eyahlukileyo.
Ndinxibe iibras iminyaka engama-47 kwaye ezi zezona zikhululekileyo endakha ndazinxiba, kubhala omnye umvavanyi. Ndilungisiwe, ndihlawulelwe idola ephezulu, kwaye ndazama zonke iindlela ezinokwenzeka. Ndiyindebe ye-G kwaye kufanelekile kwaye ndiziva ndibhetele! Kwaye zintle. Ndithenge ezintathu kwaye emva kokuba ndizifumene namhlanje ndizizamile, ndibuyele kwi-Intanethi ndaza ndayalela ezinye ezintathu!
Ukuphakamisa ukuPhakamisaUhlobo lobuntu amazon.com THENGA NGOKU
Best Bra Push-Up Epheleleyo
Ubungakanani: 32A ukuya ku-40D
Ngaba ujonga into eninzi yokuphakamisa ngaphandle kwexabiso elikhulu? Le bra iza nemibala eyahlukeneyo kunye neempawu Iibhanti ezihlengahlengiswayo neziguqulwayo ke unokufumana eyona ilungileyo, kwaye utshintshe isitayile sebra ngokungqinelana nentamo yakho.
Le ibrey efanelekileyo efanelekileyo. Ukunyanzelwa kubekwe ngokuchanekileyo emazantsi endebe, kodwa nakwicala elingaphandle elingaphandle, omnye umvavanyi ubhala. Ukutyhala kukunika ukuphakama kunye nobungakanani obongezelelweyo obufunayo, kodwa ibra ibugubungela ngokupheleleyo kwaye ayikukhupheli embindini. Amagqabi angaphantsi agqunywe kwaye aphela apho angayi kugrumba ecaleni lomzimba wakho. Kukho isixa esifanelekileyo semathiriyeli esecaleni, ke ayisiyiyo ekhwapheni lakho. Kukho imitya emibini ngasemva endicinga ukuba iyakulunga, ke umtya awuzukutyibilika egxalabeni.
Uninzi lwePush-Up eBra
UkunyusaUHarper Wilde imvucireng.com$ 40.00 THENGA NGOKU
Ubungakanani: 32A ukuya ku-42F
Olu lolunye uphawu lwebra oluthi lubambe iliso lethu ngenxa yoluhlu olubanzi lobungakanani. Le bhuti yepushup eyenziwe nguHarper Wilde ibonelela ikepusi efanelekileyo yokutsala kunye nokuphakamisa ukukhanya ngemibala enganxibanga eyiyeyona tshomi imhlophe. Inemitya enokunxitywa ngokwaseklasini okanye ngokuqhekezwa ngokusebenzisa iiJ-hooks, kwaye inokuhlengahlengiswa ngaphambili. Impumelelo!
Omnye umvavanyi uthi: Kuyinto entle kakhulu, ayibonisi ngehempe zam, iihuku zikaJ enjalo Umtshintshi womdlalo, kwaye thanda indawo enqamlezileyo ngaphambili. Ingena ngokugqibeleleyo (ndanyuka ndaya kubungakanani bekomityi yokunyusa ibra, njengoko kucetyisiwe kwaye ndicinga ukuba leyo yayiyifowuni elungileyo). Kwaye bahlaziya kwakhona iibras zakho ezindala simahla? Kuyamangalisa. Ndicinga ukuba ndifuna ukuthenga ezintlanu ngaphezulu.
Eyona T-Shirt yansuku zonke egqibeleleyo
Pushisha yonke imihla intuthuzelo esisiseko eKhanyisiweyo e-Underwire Plunge T-Shirt yeBra Phakamisa phezuluWingslove amazon.com $ 39.99$ 19.99 (50% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ubungakanani: 32A ukuya kwi-38DD
Le bhreyiti encinci ibonelela ngesixa esifanelekileyo sokuphakamisa ukudala ukubonakala kwendalo ngokupheleleyo. Kwaye, ine-underwire ehlengahlengisiweyo ukuze ungaze ube nakho ukucofa. Inqaku elinye lomvavanyi waseAmazon, Le ibra yam endiyithandayo. Indifanele kakuhle, imitya ayiwa phantsi, kwaye intle kakhulu. Igcina amantombazana kwindawo efanelekileyo-abaxakeki kwaye babekwe ngokugqibeleleyo, phezulu phezulu kunye ne-perky.
Eyona V-Neck engenazingcingo yeBra
Umzimba wenene V-Neck BraletteYinyani & Co. imvu.com$ 49.00 THENGA NGOKU
Ubungakanani: XS ukuya kwi-XL
Ubumnandi obongezelelekileyo, ubhridi wokuxhasa umsebenzi-ekhaya-yinto nje into ayifunayo amantombazana akho. Ngelixa le bra ibulala i-underwire, ine- umaleko ophindwe kabini wezinto zohlobo lwe-super-soft and stretching , kunye neekomityi ezithambileyo ezisuswayo ukugubungela ngokupheleleyo. Enye into ebalulekileyo? Ngokuqinisekileyo ayibonakali phantsi kweengubo.
Omnye umvavanyi weNordstrom uthi, Izandla ezona zibalaseleyo zeBrey endikhe ndayinxiba! Ndikhululekile! Ngokungafaniyo nezinye iibra ezingenazingcingo, le bragi ikugcina uphakamile kwaye ujongeka ngathi unxibe ibra enentambo. Kwakhona i-zero bulge emacaleni / ngasemva, akukho kugrunjwa, ithambe kakhulu ... ndinokuyinxiba le mini.
Eyona Bi Luxe iFit efanelekileyo
Umxokelelwane oSulungekileyo woMgubo weLuxe oSulungekileyoUNatori amazon.com$ 72.00 THENGA NGOKU
Ubungakanani: 32B ukuya kwi-38DDD
Le bra iye yanconywa ngamaqabane ethu kwiZiko lokuGcinwa kweNdlu eliLungileyo, nelathi lelinye lawo eyona intofontofo iibras baye bavavanya. Yenziwe ngenayiloni kunye ne-spandex, le bra ethambileyo yomelele, yolula, kwaye iyabukeka.
Omnye umthengi uthi: Ndiyayithanda ilaphu lale nto intofontofo, efanelekileyo. Ipholile kwaye ayisindi, kodwa iyayixhasa kakhulu. Ijongeka igudile phantsi kweeteki zam kunye nejezi. Ngokuqinisekileyo intanda yam entsha!
Eyona Bhra ibalaseleyo yokuNgena
Le ayisiyiyo iBra epheleleyo yokuGcina i-Underwire BraIsilumkiso amazon.com $ 40.00$ 21.53 (46% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ubungakanani: 32D ukuya ku-40D
Yakhiwe ngeekomityi ezingenamthungo ezibonelela ngenkxaso epheleleyo kunye i-satin underwire ekhululekile , le bragi ifikelelekayo ikuvumela ukuba wenze ulungelelwaniso lwakho ngaphandle kokumba okanye ukujonga. Kwaye ngenxa yokuba le bhrafu yenziwa ngokudityaniswa kwenayiloni kunye neSpandex, ikunika inkululeko engakumbi yokuhamba.
Omnye umthengi waseAmazon, obesele ekhangela i-T-shirt bra efanelekileyo, uthi: Ezi bras zilingana njengephupha. Kukhululekile, akukho kuncipha. Ijongeka igudile ngaphambili xa unxibe izikipa kunye neehempe ezibhityileyo ezahlukeneyo. Akukho migca ingaqhelekanga evela kwibra. Ndiyalele abathathu ukuba bazame kwaye ngoku bonke ndinxiba.
Eyona nto iphefumlayo yokuPholisa uBra
Hayi Uxolo iMicrofiber kunye neLace yesiqingatha seNdebe yeBraUbundlobongela x Amashumi amabini unoksa.com$ 64.95 THENGA NGOKU
Ubungakanani: 32A ukuya ku-46H
URihanna uyazi ukuba lihlabathi lifuna ntoni ngaphakathi, kwaye le bra ayidanisi. Enye yezinto ayithandayo yoyilo oluqokelelweyo, iSavage Not Sorry Microfiber kunye neLace Half Cup yeBra fe amayeza Yolula intambo ye-iridescent, i-tulle sheer, kunye I-cool-to-the-touch microfiber ukugcina wena kunye namantombazana akho niziva nintsha kwaye ninesitayile .
Omnye ophonononga amanqaku: Inomdla, intofontofo, kwaye igudile phantsi kwempahla. Akukho zingcingo zingagungqiyo okanye ukuhlala! A +++.
Ukubhala okongeziweyo nguTamekia Reece
Ingelosi amanani 555 anentsingiselo
Izihlangu ezilungileyo ze-plantar fasciitis 2020
inombolo 888 intsingiselo